दिल्लीमा आत्महत्या गरेका ११ जनाले लिए पुर्नजन्म ! यस्तो छ घटना | Rajmarga
दिल्लीमा आत्महत्या गरेका ११ जनाले लिए पुर्नजन्म ! यस्तो छ घटना
दिल्लीको बुराडीमा ११ जनाले सामुहिक आत्महत्या गरेको विषयले पूरै विश्वमा हंगामा मच्चाएको थियो। प्रहरीदेखि क्राइम ब्रान्चका अधिकारी अहिलेसम्म यो विषयमा अन्तिम निर्णयमा पुगेका छैनन्। यद्यपी यो सबै विषयलाई आत्महत्यासँग जोडेर हेरिएको छ। तर कतिपयले भने बुराडी सन्तनगरमा मृत्यु भएका ११ जनाले आत्महत्या नगरेको भएर कसैले हत्या गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्।
आत्महत्या वा हत्या भएको हो भन्ने विषयमा प्रहरीले अहिले पनि छानविन गरिरहेको छ। तर, यो बीचमा सो बुराडी काण्डसँग जोडिएको अचम्मित पार्ने विषय यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ।
सामाजिक संजालमा भाइरल भएको समाचारका अनुसार दिल्लीको बुराडीमा निधन भएका ११ जनाले पुर्नजन्म लिएका छन्। गुजरातको सुरतमा एक पासरी महिलाले ११ बच्चालाई जम्न दिएकी छन्। एकै महिलाले ११ वटा बच्चालाई जन्म दिएपछि सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले ती ११ जना बच्चालाई बुराडी काण्डसँग जोडेर हेरेका छन्। तर सामाजिक संजालमा भाइरल भएको यो समाचारलाई डक्टरले भने झुटको संज्ञा दिएका छन्। डाक्टरहरुले भने एउटी महिलाले ११ वटा बच्चा जन्माउन नसक्ने बताएका छन्। त्यसपछि यो विषयमा थप जानकारी बटुल्ने प्रयास सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले गर्दै आएका छन्।
भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार सुरतमा जन्मिएका ११ बच्चा एकै महिलाले जन्माएको नभइ नौ महिलाका बच्चा हुन्। ११ मध्ये ६ बच्चा भने एकै महिलाले जन्माएकी हुन्। दुई महिलाले जुम्लयाहा बच्चा जन्माएका हुन् भने एक महिलाले एक बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्।
यी सबै बच्चा टेस्टट्यूव प्रविधिमार्फत जन्मिएका हुन्। यी सबै बच्चाको फोटो एक अमेरिकी पारसी महिलाले सामाजिक संजालमा शेयर गरेकी थिइन्। त्यसपछि यो फोटो भाइरल भयो। यद्यपी यो पूरै विषयमा हामी कुनै पनि कुराको पुष्टि गर्न सक्दैनौं।एजेन्सी
Previous post: विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेपछि नारायणगढ मुग्लिन सडक अवरुद्ध, यात्रुलाई सास्ती
Next post: पहिरोले छोप्यो होमवर्क गर्न साथीको घर गएका बालकलाई !